Akhriso Waxyaabaha Uu Salka Ku Hayo Khilaafka Cusub Ee Ka Dhec Curtay Dawlada Fadaraalka Iyo Ahlu Suna - Borama News Network boramanews.com
Waxaa soo baxaya warar sheegaya in madaxda ugu sareysa Ururka Ahlu Sunna ay ka biyo -diidan yihiin qorshe dowladda federaalka Soomaaliya kula wareegeyso Amniga degmada DhuusaMareeb ee xarunta u ah maamulka Galmudug.
Waxaa dib uga soo noqday degmada DhuusaMareeb diyaarado la sheegay in ay la socdeen ciidamo dowladda Soomaaliya ay ka qaaday magaalada Muqdisho, kuwaa loogu talagalay in ka qeybqaataan sugida Amniga degmada DhuusaMareeb oo dhawaan la filayo in uu ka furmo shirka dib-u-heshiisiinta beelaha Galmudug.
Saraakiisha Ahlu Sunna ayaa laga soo xigtay qaarkood in ciidamadan qeyb ka aheyn heshiiskii Qarrameynta ciidamada oo ay la gaareen ra’iisal wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo wali ku sugan degmada Dhuusa-Mareeb.
Kulamo arrintan la xirira ayaa saacadihii ugu danbeeyayba ka soconayay degmada Dhuusa-Mareeb, waxaana wararku sheegayaan in wali aan wax is afgarad ah laga gaadhin qaabka sugida Amniga Dhuusa-Mareeb oo saraakiisha Ahlu Sunna doonayaa in loo daayo ciidamadii horay u sii joogay deegaanka.
Caqabadan soo ifbaxday ayaa culeys hor leh ku keeni karta hannaanka dhismaha dowlad gobolleedka Galmudug iyo shirka dib-u-heshiisiinta qorshuhu yahay in dhawaan uu halkaa ka furmo, iyadoo horay ay uga biyo diideen qorshaha ra’iisal wasaaraha ee dhismaha Galmudug odayaasha degmooyinka Cadaado iyo Gaalkacyo.
DAAWO: Waraysi Xiiso Badan Oo Uu Siyaasi Cabdi Cali Oo Uu Kaga Hadlay Xaalada Dhaqaale Ee Somaliland Mudada Uu Xilka Hayo Muuse Biixi
Gudoomiyaha WADANI Oo Ka Qeybgalay Aaska Xubin Mihiim Ah Oo Ka Tirsaneyd WADANI
DAAWO: Wasiirka Ganacsiga Iyo Maareeyaha Dekedaha Somaliland Oo Ka Warbixiyay Cashuuro Ay Ka Cawdeen Ganacsatadu
Bnnstaff Bnnstaff July 30, 2019 July 31, 2019
DAAWO: Madaxwayne Biixi Oo Ka Hadlay Halka Uu Maraya Wada Hadal Lagula Jiro Jabhada Kornayl Caare